IMMISA JIRRADA BARANBARADU WAXAY KU NOOL YIHIIN: GUDAHA IYO DABIICIGA, WAREEGGA NOLOSHA IYO MUDDADA DHEER - GURI, GURI
Baranbarada gudaha ah waa cayayaanka ukumaha leh ee leh wareegga horumarka iyo mid bacrimin ah.
Jiritaanka guriga "xayawaanka" guriga, sidaa daraadeed nasiib darro, wuxuu ku bilaabmaa naqshadda unugyada germiska labka iyo dheddiga ee jirka dumarka.
Laga soo bilaabo ukunta ilaa miraha
Natiijada bacriminta ukunta waa qolofta ukunta shakhsiga ah. Ukuntu waxay ku haboon yihiin safafka 20-30 gogo ' ooteke (otlov.ovum - ukunta, xaabada). Kaabashadan cufan ee cufan waxay qabataa hawsha ilmo-galeenka dumarka waxayna u adeegtaa sidii kaydka ukunta ilaa cayayaanka dhallinyarada ka baxa.
2-3 toddobaad gudahood ka dib marka la isku miiro qaybta dhedigga leh, iyada oo ka tagaysa meel bannaan oo meesha ay dhalatay ay dhalatay. Waxaa loo sameeyay wakhtigan, dirxiga ayaa jebinaya qolofta ukunta, gnaw iyada oo bararro ah oo tagta raadinta cuntada.
Natiijada hal gacan waa 20-30 ukumood oo leh heerka badbaadada 80-95%.
Caawimaad! Heerka badbaadada ee cayayaanka dhallinyarada iyo tirada dirxiga dillaacay waxay ku xiran tahay sida xaaladaha nololeed ee wanaagsan u yihiin deriskaaga.
Nymph oo koraya
Dibedda qaawan waxay u egtahay nuqul yar oo qof weyn ah oo aan baalasha lahayn, midabo badan oo mug leh iyo madow.
Dhaqdhaqaaqa oo hoos u dhacay miisaankii ugu hooseeyay, liddi ku ah, ayaa laga xayuubiyay maqaarka, taas oo ah sababta dad badani u malaynayaan mutawiciin albino ah.
2-6 bilood, oo ku socda dhowr maaddo yar iyo sii kordhaya, qoyan casaan leh noqdaa qaan gaar ahama imago. Baranbaro madow waxay u baahan tahay waqti dheeraad ah tan: laga bilaabo 6 bilood illaa sanad. Iyo intee sano ayaa ku noolaa baranbaro yar oo kaliya ayaa ka baraneysa.
Muddada barafka nolosha ee baranbarada ayaa saameeya qoyaan, tayada cuntada, heerkulka. Markay tahay 22 °, guska casaanku wuxuu ku dhacaa 6 bilood, iyo 30 ° 2 bilood.
Muddada bislaanku waxay ka bilaabataa iskuulka ugu dambeeya waxayna dhamaataa dhimashada cayayaanka. Tani waxay ka dhigan tahay in haweenku ay tarjumayaan caruurtooda inta ay ku noolaanayaan nolosheeda weyn. Waxay dhacdaa 6-9 jeer.
Xiiso leh Macluumaadka hiddaha ee labka ah wuxuu awoodaa in uu ku sii jiro jirka haweeneyda muddo toddobaadyo ah. Sidaa daraadeed, xirmada soo socota waxaa lagu ogaan karaa haweeney iyada oon ka qaybgalin lamaane.
Xiisaha dhabta ah waa duruusta oo kaliya marxalada imago. Intee in le'eg ayay baranbaradu ku noolyihiin? Roodhiga gudaha wuxuu ku jiraa muddada bislaanshaha 7-9 bilood, iyo madow - ilaa 2 sano. Guud ahaan, nolosha baranbaradu waxay noqon kartaa ilaa 4 sano.
Mudada noolaanta jiilalka dambe ayaa ka sarreeya kuwii hore. Tani waxay sabab u tahay kordhinta kordhay ee deriskeena xaaladaha bini-aadannimada. Xayawaanka duurku waxay ku noolyihiin wax yar.
Marka ugu sarraysa ee la qabsashada
Cayayaanka casriga ahi waxay leeyihiin awood aad ufudud badan waxayna u gudbiyaan faracooda.
Sidaa darteed, wareegga nolosha ee baranbaradu waxay kordhi kartaa waqti.
Waxaad awoodaa inaad hoos u dhigto rajadooda nolosha iyaga oo abuuraya xaalado aan fiicnayn oo deriskooda ah. Ama adoo ka bilaabaya iyaga halganka kiimikada la yaqaan.
Liiska daroogooyinka si wanaagsan loo dhisay:
aerosols iyo sprays: Raptor, Guriga Nadiifinta, Raid, Bareh;
Jeelaha: Global, Dohlox;
dabagal: Dagaal, Forsyth;